“CDF ကပစ်ချခဲ့တဲ့ စကစ ဒရုန်းရဲ့ စျေးနှုန်း နှင့် စွမ်းဆောင်ရည် ဘယ်လောက်မြင့်မားသလဲ. . . .ဖတ်ကြည့်ပါ” – စွယ်စုံသုတ
“CDF ကပစ်ချခဲ့တဲ့ စကစ ဒရုန်းရဲ့ စျေးနှုန်း နှင့် စွမ်းဆောင်ရည် ဘယ်လောက်မြင့်မားသလဲ. . . .ဖတ်ကြည့်ပါ”
CDF ပစ်ချတဲ့ စကစ ဒရုန်းဟာ ဗုံးတွေလည်းသယ်ဆောင်နိင်တဲ့ တရုတ်ထုတ် ထောက်လှမ်းရေးသုံးဒရုန်းဖြစ်ပါတယ်
ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်း၊ ဟားခါးနဲ့ ထန်တလန်မြို့နယ်ကြား လိုင်ကွာ‌ဆည်အနီးမှာ အကြမ်းဖက် စကစတပ်ရဲ့ အဓိကထောက်လှမ်းရေးသုံး ဒရုန်းတစ်စင်းကို ဩဂုတ်လ ၁၁ ရက်ညတွင် CDF တပ်ကပစ်ချခဲ့ပါတယ်လို့ ပြည်သူဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ယင်းဒရုန်းဟာ တရုတ်ထုတ် Mavic Pro Platinum အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး သိန်း ၂၀ ဝန်းကျင်(ဒေါ်လာ ၁၂၀၀ -၁၃၀၀)တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
အမြင့်ပေ ၁၆၄၀ အကွာအဝေး ၅ မိုင်ခန့် ပျံသန်းနိင်ပြီး ၄၀ မမ ဗုံးလည်းသယ်ဆောင်နိင်ကာ remote control ကနေပစ်မှတ်ကိုအတိအကျပစ်နိင်ပါတယ်။
ယင်းဒရုန်းဟာ ဗီဒီယိုကော ဓာတ်ပုံပါ 4k အဆင့်ထိ Zoom ဆွဲနိင်ပါတယ်။
CDF ပစ္ခ်တဲ့ စကစ ဒ႐ုန္းဟာ ဗုံးေတြလည္းသယ္ေဆာင္နိင္တဲ့ တ႐ုတ္ထုတ္ ေထာက္လွမ္းေရးသုံးဒ႐ုန္းျဖစ္
ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္း၊ ဟားခါးနဲ႔ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ၾကား လိုင္ကြာ‌ဆည္အနီးမွာ အၾကမ္းဖက္ စကစတပ္ရဲ႕ အဓိကေထာက္လွမ္းေရးသုံး ဒ႐ုန္းတစ္စင္းကို ဩဂုတ္လ ၁၁ ရက္ညတြင္ CDF တပ္ကပစ္ခ်ခဲ့ပါတယ္လို႔ ျပည္သူဘက္ကထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
ယင္းဒ႐ုန္းဟာ တ႐ုတ္ထုတ္ Mavic Pro Platinum အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး သိန္း ၂၀ ဝန္းက်င္(ေဒၚလာ ၁၂၀၀ -၁၃၀၀)တန္ဖိုးရွိပါတယ္။ အျမင့္ေပ ၁၆၄၀ အကြာအေဝး ၅ မိုင္ခန႔္ ပ်ံသန္းနိင္ၿပီး ၄၀ မမ ဗုံးလည္းသယ္ေဆာင္နိင္ကာ remote control ကေနပစ္မွတ္ကိုအတိအက်ပစ္နိင္ပါတယ္။
ယင္းဒ႐ုန္းဟာ ဗီဒီယိုေကာ ဓာတ္ပုံပါ 4k အဆင့္ထိ Zoom ဆြဲနိင္ပါတယ္။
မိသားစုတောင်အသိမပေးဘဲ ယုံကြည့်တဲလမ်းကို ‌ရွေးချယ်ရင်း သူဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာ ပရိသတ်ကြီးကို စပရိုက်တိုက်လိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ဟိန်းထက်
ချစ်ရတဲ့သားငယ်လေးရဲ့မွေးနေ့လေးကိုတောင် အနားမှာရှိမနေနိုင်ပဲအဝေးကနေပဲဆုတောင်ပေးခွင့်ရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတဲ့ ကိုပေါက်